စိတ်ခံစားချက်တွေက အရေပြား အလှအပကို ဘယ်လိုတွေ ထိခိုက်စေနိုင်လဲ? – For her myanmar
စိတ်ခံစားချက်တွေက အရေပြား အလှအပကို ဘယ်လိုတွေ ထိခိုက်စေနိုင်လဲ?
Posted on September 26, 2018 August 6, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
စိတ်ခံစားချက်တွေကတော့ ၂၄ နာရီအတွင်း စွယ်စုံလာတာပါပဲ။ မနက်ခင်း အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ စိတ်လောနေရတာမျိုး ၊ရုံးသွားချိန်မှာ မီးပွိုင့်မိနေလို့ YBS ပေါ်က ဆင်းပြီး တက္ကစီငှားသွားရင် ကောင်းမလား မကောင်းဘူးလား တွေဝေနေချိန်မျိုး ၊ ရုံးရောက်တော့ ဒေါသထွက်စရာနဲ့ ကြုံရတာမျိုး စသဖြင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်ခံစားမှုမျိုးစုံကိုတော့ ကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲ။ ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေက ကိုယ့်အသားအရေ အလှအပကို ပျက်စီးစေခဲ့တယ်ဆိုရင်…
စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ ဝက်ခြံ
ခံစားချက်တွေ အားလုံးထဲမှာမှ စိတ်ဖိစီးမှုက အကြီးမားဆုံး ရန်သူတော်ကြီးပါပဲ။ အသက်တွေကြီးလာလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း အိုတာထက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အိုတာက ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုက မွေးညှင်းပေါက်တွေ ပိတ်စေပြီး ဝက်ခြံတွေ ထွက်စေတဲ့ အဆီကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ဝက်ခြံဖုလေးတွေက အစီအရီ ပေါက်လာတယ်ဆိုတာ ဒါကြောင့်ပေါ့။
စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ချောကလက် ၊ အာလူးကြော်၊ ဘီယာတို့ကို တောင့်တတတ်ပြီး ရေသောက်နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ ရေသောက်နည်းတော့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ပြီး အရေးအကြောင်းတွေထင် ၊ ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
မနက်ခင်း ရုံးချိန်အမီသွားဖို့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာကြီးနဲ့ ဒေါသထွက်ပြီး ပြောဆိုရတာတွေ အိမ်ကအမေနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ စူဆောင့်အောင့်ပြီး ထွက်လာရတာတွေ…ဒီလိုမျိုး ဒေါသစိတ်က အလှပျက်စေပါတယ်နော် ယောင်းရေ။ ဒေါသထွက်တော့ မျက်နှာကြီးက မှုန်သုန်ပြီး မှုန်သုန်တာတွေများလာတော့ မျက်ခုံးနှစ်ခုအလယ်က အရေပြား တွန့်လာပါလေရော။
Related Article >>> အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသဘာဝ ဆီ (၅) မျိုး
ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ အရေပြား မလန်းဆန်းခြင်း
လူတိုင်းကတော့ ဝမ်းနည်းတဲ့အချိန် ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အကြာကြီး ဝမ်းနည်းနေမယ်ဆိုရင် အရေပြားကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ညလုံးပေါက် ငိုခဲ့မိတဲ့နေ့တွေမှာဆို မနက်မိုးလင်းတော့ ခေါင်းတွေကိုက်၊ မျက်လုံးကြီးက ဖောင်းကားမို့အစ်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေက အရေပြားကို မကျန်းမာစေဘဲ ပိုပြီး ပင်ပန်းစေပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုက အပျော့စားကနေ လုံးဝအပြင်းစားကြီးအထိရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အစာချေစနစ်ကို ပထမဦးဆုံး သက်ရောက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အစာမချေနိုင်တဲ့အတွက် အာဟာရကို ကောင်းစွာမစုပ်ယူနိုင်တာကြောင့် အရေပြားတွေဆီလည်း လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ ရနိုင်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု များလာပြီဆိုရင် ချွေးထွက်များပြီး ချွေးပေါက်တွေပိတ်လို့ ဆားဝက်ခြံအမည်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း နဲ့ မျက်နှာအရေးအကြောင်း
ဒေါသထွက်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းတို့လိုပဲ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကလည်း မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်စေပြီး မျက်နှာရှုံ့တွစေပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျပြီဆိုရင် သွေးကြောထဲမှာ ကော်တီဇောလ် ပမာဏ မြင့်တက်လာပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ၊ အရေပြား အရောင်မှိန်ခြင်းနဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီး ဝိတ်တက်စေပါတယ်။ ဝက်ခြံလည်း ပေါက်စေပါတယ်။
ရှက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဦးနှောက်အသိကနေ အရေပြားဆီ ရောက်သွားချိန်မှာ မျက်နှာကြီး နီမြန်းလာတာမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ အရိုးကြွက်သားတွေဆီ သွားတဲ့ သွေးပို့မှုက အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာကြောင့် အရေပြားဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ အားနည်းပြီး အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတွေ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ခံစားချက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေပြီး အရေပြားသဏ္ဍာန်ကိုလည်း သက်ရောက်စေပါတယ်။ အိမွန်ဆို စိတ်ဆိုးလာပြီဆိုရင် အလိုလို မျက်နှာစူပုတ်လာပြီး နှုတ်ခမ်းက ရှေ့ကို တစ်တောင်လောက် ရောက်သွားတာပါပဲ။ ရယ်မောခြင်းက အသက်ရှည်စေတယ်ဆိုသလိုပဲ ရယ်မောခြင်းကလည်း နုပျိုစေပါတယ်ယောင်းတို့ရေ… ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ နေ့ရက်တိုင်း များများရယ်မောပေးပြီး နုပျိုကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
References : Everyday Health, Daily Vanity, Works With Weather
စိတျခံစားခကျြတှကေတော့ ၂၄ နာရီအတှငျး စှယျစုံလာတာပါပဲ။ မနကျခငျး အိပျရာထနောကျကလြို့ စိတျလောနရေတာမြိုး ၊ရုံးသှားခြိနျမှာ မီးပှိုငျ့မိနလေို့ YBS ပျေါက ဆငျးပွီး တက်ကစီငှားသှားရငျ ကောငျးမလား မကောငျးဘူးလား တှဝေနေခြေိနျမြိုး ၊ ရုံးရောကျတော့ ဒေါသထှကျစရာနဲ့ ကွုံရတာမြိုး စသဖွငျ့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ စိတျခံစားမှုမြိုးစုံကိုတော့ ကွုံတှနေ့ရေမှာပါပဲ။ ဒီစိတျခံစားခကျြတှကေ ကိုယျ့အသားအရေ အလှအပကို ပကျြစီးစခေဲ့တယျဆိုရငျ…
စိတျဖိစီးမှု နဲ့ ဝကျခွံ
ခံစားခကျြတှေ အားလုံးထဲမှာမှ စိတျဖိစီးမှုက အကွီးမားဆုံး ရနျသူတျောကွီးပါပဲ။ အသကျတှကွေီးလာလို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး အိုတာထကျ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ အိုတာက ပိုမွနျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိတျဖိစီးမှုက မှေးညှငျးပေါကျတှေ ပိတျစပွေီး ဝကျခွံတှေ ထှကျစတေဲ့ အဆီကို အလှနျအကြှံ ထုတျပေးပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့နတှေ့ဆေိုရငျ ဝကျခွံဖုလေးတှကေ အစီအရီ ပေါကျလာတယျဆိုတာ ဒါကွောငျ့ပေါ့။
စိတျဖိစီးမှုမြားရငျ ခြောကလကျ ၊ အာလူးကွျော၊ ဘီယာတို့ကို တောငျ့တတတျပွီး ရသေောကျနညျးသှားတတျပါတယျ။ ရသေောကျနညျးတော့ ရဓောတျခနျးခွောကျပွီး အရေးအကွောငျးတှထေငျ ၊ ဝကျခွံတှေ ထှကျလာတတျပါတယျ။
မနကျခငျး ရုံးခြိနျအမီသှားဖို့ တက်ကစီဒရိုငျဘာကွီးနဲ့ ဒေါသထှကျပွီး ပွောဆိုရတာတှေ အိမျကအမနေဲ့ ရနျဖွဈလို့ စူဆောငျ့အောငျ့ပွီး ထှကျလာရတာတှေ…ဒီလိုမြိုး ဒေါသစိတျက အလှပကျြစပေါတယျနျော ယောငျးရေ။ ဒေါသထှကျတော့ မကျြနှာကွီးက မှုနျသုနျပွီး မှုနျသုနျတာတှမြေားလာတော့ မကျြခုံးနှဈခုအလယျက အရပွေား တှနျ့လာပါလရေော။
Related Article >>> အသားအရေ ထိနျးသိမျးဖို့အတှကျအကောငျးဆုံးသဘာဝ ဆီ (၅) မြိုး
ဝမျးနညျးခွငျးနဲ့ အရပွေား မလနျးဆနျးခွငျး
လူတိုငျးကတော့ ဝမျးနညျးတဲ့အခြိနျ ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျအကွာကွီး ဝမျးနညျးနမေယျဆိုရငျ အရပွေားကို ထိခိုကျပါတယျ။ ညလုံးပေါကျ ငိုခဲ့မိတဲ့နတှေ့မှောဆို မနကျမိုးလငျးတော့ ခေါငျးတှကေိုကျ၊ မကျြလုံးကွီးက ဖောငျးကားမို့အဈနတောမြိုးတှေ ဖွဈဖူးပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးတှကေ အရပွေားကို မကနျြးမာစဘေဲ ပိုပွီး ပငျပနျးစပေါတယျ။
စိတျလှုပျရှားမှုက အပြော့စားကနေ လုံးဝအပွငျးစားကွီးအထိရှိပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ အစာခစြေနဈကို ပထမဦးဆုံး သကျရောကျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျက အစာမခနြေိုငျတဲ့အတှကျ အာဟာရကို ကောငျးစှာမစုပျယူနိုငျတာကွောငျ့ အရပွေားတှဆေီလညျး လုံလောကျတဲ့ အာဟာရ ရနိုငျစမှော မဟုတျပါဘူး။ စိတျလှုပျရှားမှု မြားလာပွီဆိုရငျ ခြှေးထှကျမြားပွီး ခြှေးပေါကျတှပေိတျလို့ ဆားဝကျခွံအမညျးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
စိတျဓာတျကခြွငျး နဲ့ မကျြနှာအရေးအကွောငျး
ဒေါသထှကျခွငျးနဲ့ ဝမျးနညျးခွငျးတို့လိုပဲ စိတျဓာတျကခြွငျးကလညျး မကျြနှာပျေါမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ဖွဈစပွေီး မကျြနှာရှုံ့တှစပေါတယျ။ စိတျဓာတျကပြွီဆိုရငျ သှေးကွောထဲမှာ ကျောတီဇောလျ ပမာဏ မွငျ့တကျလာပွီး ဆံပငျကြှတျခွငျး ၊ အရပွေား အရောငျမှိနျခွငျးနဲ့ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုဖွဈပွီး ဝိတျတကျစပေါတယျ။ ဝကျခွံလညျး ပေါကျစပေါတယျ။
ရှကျရှံ့စိတျဖွဈပွီဆိုရငျ ဦးနှောကျအသိကနေ အရပွေားဆီ ရောကျသှားခြိနျမှာ မကျြနှာကွီး နီမွနျးလာတာမြိုး ဖွဈစပေါတယျ။ အရိုးကွှကျသားတှဆေီ သှားတဲ့ သှေးပို့မှုက အနှောငျ့အယှကျဖွဈတာကွောငျ့ အရပွေားဆဲလျဖှဲ့စညျးပုံတှေ အားနညျးပွီး အငျဇိုငျးထုတျလုပျမှုနှုနျးတှေ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
ခံစားခကျြတှကေ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကောငျးကြိုးနဲ့ ဆိုးကြိုးတှကေို ဖွဈစပွေီး အရပွေားသဏ်ဍာနျကိုလညျး သကျရောကျစပေါတယျ။ အိမှနျဆို စိတျဆိုးလာပွီဆိုရငျ အလိုလို မကျြနှာစူပုတျလာပွီး နှုတျခမျးက ရှကေို့ တဈတောငျလောကျ ရောကျသှားတာပါပဲ။ ရယျမောခွငျးက အသကျရှညျစတေယျဆိုသလိုပဲ ရယျမောခွငျးကလညျး နုပြိုစပေါတယျယောငျးတို့ရေ… ဖွဈနိုငျရငျတော့ နရေ့ကျတိုငျး မြားမြားရယျမောပေးပွီး နုပြိုကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလိုကျပါတယျ။
Tagged Beauty, Effect, Feelings, mess, moods, skin
Posted on August 21, 2017 Author Akari
ဆံပင်တွေကိုင်လိုက်တိုင်း ကျွတ်ကျွတ်ပါလာလို့ စိတ်ညစ်နေကြပြီလား ယောင်းတို့ရေ..ဒါဆိုရင် ဒီလိုအကျင့်လေးတွေကို ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်…
မျက်ခုံးပုံသွင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယောင်းတို့ မသိသေးတဲ့အချက်တွေ …
Posted on October 18, 2018 Author Megan
ငင့် အက်မင်လည်းမှားနေတယ်ဟ 😳😳😳
ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေနဲ့ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေတွေအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း
Posted on October 13, 2017 Author Hana
ခုမှ ကိုယ်ဘာသုံးရမလဲဆိုတာ သိတော့တယ် 😀